विघटनअघिका मन्त्री फर्काउन मिल्दैनन, आदेशमै चार मन्त्रीको नाम तोकिएको छः पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल (अन्तर्वार्ता) - Nepal Samaj
विघटनअघिका मन्त्री फर्काउन मिल्दैनन, आदेशमै चार मन्त्रीको नाम तोकिएको छः पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल (अन्तर्वार्ता)
८ असार, २०७८नेपाल समाजमुख्य समाचार, राजनीति, विचार
प्रधानमन्त्रीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
मेरो नजरमा संविधानसम्मत आदेश भयो । धारा ७७ अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद् पनि कामचलाउ छ । उहाँलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार छैन भनेर आदेशमा भनिएको छ । त्यो भनेको संविधानअनुसारकै आदेश हो । यो आदेशले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा भएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै अहिले कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयले संसद् विघटनअगाडिकै मन्त्रिपरिषद् नै कायम हुन्छ भनेका छन् भने कतिपयले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै रह्यो भनेका छन् । अदालतको आदेशले भनेको के हो ?
त्यसबारे आदेश बोलेको छैन । मन्त्रीको प्रसंगमा पाँच सदस्यीय भनेर नामै किटान गरिएको छ । आदेशमा पहिलाको मन्त्री पुनस्र्थापित हुने भनिएको छैन । नभनिएको विषयमा कल्पना गर्न सकिँदैन, निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने भनिएको छ, केहीले त्यो टाइपिङ मिस्टेक हो, सुधार होला पनि भनेका छन् किनकि उहाँ विघटनपछि मात्र उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
अब प्रधानमन्त्रीसँग के विकल्प छ, उहाँले सरकार कसरी चलाउने ?
मन्त्रिपरिषद् त छँदै छ । पाँच सदस्यीय । अर्कोमा जान मिल्ने बाटो उहाँसँग छैन । फेरि यो मन्त्रिपरिषद्ले काम चल्छ । एकजनाको पनि मन्त्रिपरिषद् हुन्छ ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यसलाई मिचेर दुई–दुईपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कदम पटक–पटक किन दोहोरिएका होलान् ?
पहिलो विषय, आदेशमा यो सरकारलाई चुनावी सरकार भनेर लेखेको छैन । हो, अवश्य गराएको हो । यो सरकार संसद्ले बनाएको त होइन नि ! किनकि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा विचाराधीन छ, पुुनस्र्थापना भएनछ भने मात्र त्यो चुनावी सरकार हो । अहिले यो कामचलाउ सरकार हो, आदेश पनि त्यही अर्थमा आएको छ । यस्तो सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने परम्परा छ । अरू ठाउँमा पनि गरिँदैन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको हो । हो, संविधानमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन । तर, लोकतान्त्रिक राज्यमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । यस व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका वा व्यवस्थापिका सर्वोच्च हुने होइन, संविधान सर्वोच्च हुने हो । सबैको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार मात्रै होइन, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्व राख्ने सरकारका कैयौँ निर्णय र कदममा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गरी खारेज गरिदिएको छ । यसमा केही विशेष सन्देश पनि छ कि ?
विशेष सन्देश भन्ने होइन । संविधानको संरक्षण र पालना गराउने प्रयास भएको मात्र हो । नागरिकता अध्यादेश होस् वा ढुंगा–गिटी निर्यातको निर्णय, सबैमा अन्तरिम आदेश भएको हो, अन्तिम आदेश भएको होइन । यसलाई फैसला मान्न सकिँदैन । अध्यादेश ल्याउनै नसक्ने भनिएको होइन, संसद् विघटन गरेर आफूअनुकूल ल्याउनुभएन मात्र भनेको हो । जरुरी परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । सबै अध्यादेश खारेज गरेको पनि छैन । केही अझै विचाराधीन पनि छन् । इजलास गठन हुन सकेको छैन, तर बिस्तारै ट्र्याकमा आउला ।
तर, कार्यपालिकाका हरेक निर्णयमा न्यायपालिकाले अवरोध गर्न थाल्यो भने जननिर्वाचित सरकारले केही काम गर्न नपाउने नजिर बस्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन थालेका छन् ? कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हाबी भएको हो र ?
होइन । अदालतले कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ ? संविधानविपरीत भएका कदम रोकेको मात्र हो । संविधान पालना गर भनेको हो । प्रत्येक आदेशमा संविधानका धारा उल्लेख भएका छन् । यो–यो धारा अनुकूल भएन, त्यसैले संविधानबमोजिम गर भनिएको हो । अझ, संविधानको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी त राष्ट्रपतिको हो । तर, उहाँले सक्नुभएन भने मुद्दा अदालतमा आउने हो । अदालतले आफैँ सुओ मोटो (स्वयं संज्ञानमा) लिएर आदेश दिइरहेको छैन । न्यायालयमा मुद्दा लिएर आएपछि निर्णय त दिनैपर्छ, न्याय गर्नैपर्छ । अहिले त्यही नियमित काम भएको हो । अदालतबाट यो काम समयभित्र भएन भने आलोचना गर्ने हो । अदालतले समयमै निर्णय दिनु भनेको संविधानको संरक्षण गर्नु हो । सक्रियता बढाएको होइन ।
५ पुसको संसद् विघटनदेखि, नेकपा भंगसम्म, गैरसांसद सात मन्त्रीको पदमुक्तदेखि नागरिकता अध्यादेशसम्म, चुरे दोहनमा अंकुशदेखि राजदूत निर्देशिका परिवर्तन खारेजसम्म अदालतका धेरैजसो निर्णय स्वागतयोग्य भनिएको छ । तर, दल र सरकारका विवाद सबै अदालतबाट निरुपण हुने नजिरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीलाई कमजोर पार्छ कि ?
होइन । दलहरूले पनि कानुनअनुसार कार्य गर्नुपर्यो । संवैधानिक अंगहरूले पनि संविधान पालना गनुपर्यो । कतै पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न गएको छैन । केही हुनुअगावै यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु भनेर सुरुमै भन्न गएको छैन । मुद्दामा पक्षहरू अदालत गएपछि मात्र अदालत बोलेको छ । अदालतको कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । खराब गरेको छ भने उचित शब्दमा आलोचना पनि गर्न पाइन्छ । उसको आलोचना गर्नै नपाउने भन्ने होइन । यसमा प्रतिबन्ध छैन ।
अदालतका शृंखलाबद्ध आदेशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पनि सन्देश दिएको मान्नेहरू छन् । कतिपय विघटन सदर हुन्छ भन्छन्, कतिपयले पुनस्र्थापना हुने भयो भन्छन् । यसमा त्यस्तो कुनै संकेत देखिन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला हुनेवाला छ । त्यो पक्कै पनि संविधानअनुसार नै हुन्छ । धारा ७६ का सबै उपधाराहरू विचारणीय र विचाराधीन छन् । यसअघि देव गुरुङसमेत निवेदक भएको मुद्दामा पनि यसबारे सर्वोच्च बोलिसकेको छ, त्यसैलाई पनि आधार मानिएला । तर, भर्खर भएका आदेशहरूले यो विषयमा केही संकेत गरेका छैनन् । किनकि यो मुद्दा फरक हो । विघटनका मुद्दासँग यिनको सरोकार छैन । एउटा केचाहिँ भन्नैपर्छ भने केही यस्ता फैसला पनि भए जसमा जनताको चित्त बुझेको थिएन, तैपनि स्विकारे । जस्तो ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दा । तर, पछिल्लो समय भइरहेका संविधानसम्मत आदेशबाट जनताको मनोबल उच्च भएको छ, स्वागतयोग्य आदेश आएका छन् । त्यसैले विघटनको विषयमा पनि सबैले अदालतबाट राम्रै फैसला आउने अपेक्षा गरेका छन् । अहिलेलाई त्यति मात्र भन्न सकिन्छ । याे अन्तर्वार्ता नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे छ ।
नागरिकलाई छिटो खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई कांग्रेस नेता सिंहको आग्रह
लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला वली पार्टीको सम्पर्क बाहिर
स्याङ्जामा कांग्रेसका दश हजारभन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, तीन एजेण्डामाथि छलफल हुने